Ebe Izonahụ Ifufe
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Febụwarị 15, 2002
GỤỌ NKE Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Zulu
Ị PỤRỤ ịhụ osisi nta nke gbasiri ike a na-akpọ alpine rose ka ọ na-eto n’elu ugwu Alps nke Europe. Alpine rose a dị mkpụmkpụ na-etokarị n’etiti osisi nta ndị tụhịkọtara ọnụ n’ala, iji guzogide oké ifufe si n’elu ugwu. Ifufe na-adịghị akwụsị akwụsị na-eyi ịdị adị nke osisi ndị dị na Alps egwu site n’ime ka okpomọkụ ha na-enweta belata, na-eme ka ikuku na ájá na-ekpo ọkụ, na ịbụpụta mkpọrọgwụ ha.
Alpine rose a na-alanarịkarị oké ifufe ahụ site n’ito n’ime oghere ndị dị n’etiti oké nkume. Ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ na ájá ndị dị n’ebe ndị a adịghị ebu ibu, oghere ndị dị n’etiti nkume ndị ahụ na-echebe osisi ndị a pụọ n’ifufe ma na-eme ka ha nwee ike ichekwa mmiri ha. N’ịbụ ndị na-afọ nke nta ka ọ bụrụ na a dịghị ahụ ha anya n’ihe ka ukwuu n’ime afọ, n’oge okpomọkụ, alpine rose a na-eji okooko osisi ndị na-acha ọbara ọbara ma na-egbuke egbuke achọ ugwu ndị ha nọ n’elu ha mma.
Aịzaịa onye amụma kọwara na Chineke ga-ahọpụta “ndị isi,” nakwa na onye ọ bụla n’ime ha ga-adị ka “ebe izonahụ ifufe.” (Aịsaịa 32:1, 2) N’okpuru nduzi nke Eze ahụ, bụ́ Kraịst Jizọs, ndị a bụ́ ndị isi n’ụzọ ime mmụọ, ma ọ bụ ndị nlekọta, ga-adị ka nkume gwunyesiri ike n’ala, ndị na-akwụsi ike n’oge nsogbu ma ọ bụ ahụhụ. Ha ga-abụ ndo e kwesịrị ịtụkwasị obi n’oge ahụhụ ma nyere ndị nọ ná mkpa aka ichekwa mmiri ime mmụọ ha nwetara site n’Okwu Chineke.
Ifufe nke mkpagbu, nkụda mmụọ, ma ọ bụ ọrịa, pụrụ ifekwasị Onye Kraịst, na-eme ka okwukwe ya kpọnwụọ ma ọ bụrụ na e chebeghị ya echebe. Ndị Kraịst bụ́ ndị okenye pụrụ inye nchebe site n’ige ntị nke ọma ná nsogbu ya, na-enye ya ndụmọdụ ndị dabeere na Bible, nakwa agbamume na enyemaka ndị bara uru. Dị ka Eze ha a họpụtara ahọpụta, bụ́ Kraịst Jizọs, ha na-achọ inyere ndị ‘a chụsaworo achụsa’ aka. (Matiu 9:36) Ha na-achọkwa inyere ndị ọzọ aka bụ́ ndị ifufe ozizi ụgha kpaworo aka ọjọọ. (Ndị Efesọs 4:14) Enyemaka dị otú ahụ nke na-abịa n’oge ya pụrụ ịba oké uru.
“Enwere m uche mkpasasị mgbe ụfọdụ ezi ndị enyi m hapụrụ ọgbakọ, n’otu oge ahụkwa, ọbara agbaba nna m n’ụbụrụ isi,” ka Miriam na-akọwa. “Iji merie ịda mbà n’obi m, amalitere m iso otu nwa okorobịa ụwa na-eyi oge mkpapụ. N’oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, n’inwe mmetụta nke ịbụ onye na-erughị eru, agwara m ndị okenye ọgbakọ na ekpebiwo m ịhapụ eziokwu ahụ, ebe ọ bụ na m ji n’aka na Jehova apụghị ịhụ m n’anya.
“N’oge a ihe siiri m ike, otu okenye dị ọmịiko chetaara m afọ ndị m jeworo ozi dị ka onye ozi ọsụ ụzọ oge nile. Ọ gwara m na ikwesị ntụkwasị obi m na-amasị ya mgbe nile, o jikwa obiọma gwa m ka m kwe ka ndị okenye nyere m aka, iji mesighachi m obi ike na Jehova hụrụ m n’anya. Mmasị ịhụnanya ha nwere n’ebe m nọ n’oge ahụ ihe siiri m ike dị m ka ‘ebe nzoba’ n’oge oké ifufe ime mmụọ ahụ nke fekwasịrị m. N’ime otu ọnwa, akwụsịrị m mmekọrịta mụ na enyi m nwoke, anọgidewokwa m na-ejegharị n’ụzọ nke eziokwu kemgbe ahụ.”
Ndị okenye na-enwe afọ ojuju mgbe ha hụrụ Ndị Kraịst ibe ha ka ha na-enwe ọganihu n’ụzọ ime mmụọ n’ihi nchebe e nyere ha n’oge kwesịrị ekwesị. ‘Ebe nzoba’ ndị a na-emekwa ka anyị nụrụtụ ụtọ nke enyemaka ime mmụọ bara ụba anyị ga-enweta n’oge Ọchịchị Narị Afọ Iri nke Kraịst.
Nhọrọ Gị n’Ihe Banyere Ụkpụrụ
Ụkpụrụ Chineke Pụrụ Ịbara Gị Uru
Chọọchị Na Ọchịchị na Byzantium
Ha Nagidere Ogwu n’Anụ Ahụ́ Ha
Ịnagide “Ogwu n’Anụ Ahụ́”
Ndị A Kwadebere n’Ụzọ Zuru Ezu Dị Ka Ndị Na-ezi Okwu Chineke
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Febụwarị 15, 2002
Febụwarị 15, 2002
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Febụwarị 15, 2002